समानान्तर Samanantar: कस्तो नेता छान्ने हो?
कस्तो नेता छान्ने हो?
महाधिवेशन उद्घाटन समारोह नेपाली कांग्रेसजस्तै आकर्षक तर अव्यवस्थित रह्यो। बन्द सत्रका कार्यक्रम पनि यस्तै ल्याङफ्याङे शैलीमै सम्पन्न हुनेछ। कांग्रेस चिन्नेका लागि यो असहज पनि लाग्दैन। उद्घाटन समारोहका लभगभ सबै वक्ताले कांग्रेसको इतिहासको सराहना र उज्यालो भविष्यको कामना गरे। अधिकांश वक्ताले अहिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता संकटमा भएको धारणा पनि प्रकट गरेका थिए। यही क्रममा गैरकम्युनिस्ट नेताले कांग्रेसलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियता जोगाउन अब पनि नेतृत्व गर्न आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादीको छहारी र सबैका लागि मञ्च बन्न सकोस् भन्ने चाहना व्यक्त अव्यक्तरूपमा प्रकट भयो। यसले के स्पष्ट गर्छ भने कांग्रेसले असल नेता छान्न सके उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न लोकतान्त्रिक शक्ति तयार छ। बुझ्न र धान्न सके कांग्रेसका नेताहरूका लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो। नैतिकता र निष्ठाका कसीमा अब्बल ठहरिने नेताले मात्र मुलुकको नेतृत्व गर्नसक्छ। यसैले बेलाको बोली बुझ्ने हो भने पार्टी चलाउनेमात्र हैन लोकतन्त्रको रक्षा गर्नसक्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले छान्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस सिद्धान्तबाट विचलित भएको गुनासो कमल थापादेखि पुष्पकमल दाहालसम्मले गरे। दुवैले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको प्रशंसा पनि गरे। विडम्बना, उति बेला कोइरालाको विरोध यिनै दुवै थरी चरमपन्थीले एकै स्वरमा गरेका थिए। यस्तै, अहिले कांग्रेसलाई नचिन्नेहरू यसका नीति र सिद्धान्तका व्याख्याता बनेका छन्। कांग्रेसजनले यिनका बकवासमा ध्यान दिनु जरुरी छैन। तर, कांग्रेसको भविष्यको चिन्ता चाहिँ गर्नुपर्छ।
हुन त, कांग्रेसमा २०१७ पछि नै खासै सैद्धान्तिक बहस भएको छैन। यसबीच सशस्त्र आन्दोलन, सत्याग्रह, जनआन्दोलनलगायतका ठूलाठूला निर्णय भए। नेताले निर्णय गरे कार्यकर्ताले आत्मसात् गरे। ती निर्णय अहिलेसम्म गलत सिद्ध भएका पनि छैनन्। कांग्रेसको संस्कार नबुझ्नेले यस अभ्यासलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव भन्ने गर्छन्। कांग्रेसका नेताले सबैका राय बुझ्थे र तदनुरूप सही निर्णय गर्थे। परिजन र पुरजनको घेराले कांग्रेसजनलाई नेतासम्म पुग्न नदिएपछि पार्टी र जनताबीच पर्खाल खडा भएको हो। जनताको कुरा सुन्ने बानी र बेलाको बोली बुझ्ने क्षमता भएका नेताले जनभावनाअनुरूप निर्णय गर्थे। यसैले संस्थागत निर्णयको माग पनि हुँदैन थियो। जनाधारित पार्टी भएकाले कार्यकर्तामात्रको सहभागितामा निर्णय गर्दा संस्थागत त होला तर जनभावनाअनुसार नहुने जोखिम धेरै हुन्छ। जनाधारित उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको शैली र संस्कार भने जनभावनाको कदर हो। पदाधिकारीको निर्वाचन, सामूहिक नेतृत्वजस्ता जनाधारित पार्टीमा नमिल्ने ‘पराइ संस्कार' भित्र्याएकाले नेपाली कांग्रेसमा समस्या देखिन थालेका छन्। चुनाव नहुँदै पदाधिकारीको संख्या थप गर्न माग भइसकेको छ। यसले चुनावपछि धान्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। कांग्रेसले पार्टीलाई ‘कार्यकर्तामा आधारित' बनाएमा त्यस्तै फजिती भोग्नुपर्नेछ। महाधिवेशनमा यसमा अहिले विवाद गरे पनि परिवर्तन हुन गाह्रै छ। यद्यपि, सभापतिको हात बाँध्दा पार्टी कक्रक्क पर्ने यथार्थ जिल्ला सभापतिहरूले केही बुझेजस्तो छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि ध्यान दिनुपर्छ।
यस पटकको महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नीति, संगठनको संरचनामा खासै विवाद नहोला। कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा आत्मसात् गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणमा कांग्रेसभित्र खासै विवाद देखिएन। चित्त नुबझाउनेले पनि किसुनजीलेजस्तो दुत्कार्ने वा विरोध गर्ने आँट गरेका छैनन्। यसैले पार्टीको बन्द सत्रको औपचारिकता पनि चुनावमुखी नै हुनेछन्। प्रतिवेदनमा छलफलका क्रममा बोल्न जाने पनि नजाने पनि, सन्दर्भ मिले पनि नमिले पनि उमेदवारले मतदाताको ध्यान तान्न केही बोल्ने जमर्को गर्नेछन्। पहिलेजस्तै यस पटकको महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनमै केन्द्रित र सीमित हुनेछ।
सैद्धान्तिक विवाद नभएका बेला नेतृत्व छान्दा व्यक्तिको आचरणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। आचार गलत हुनेको विचार सही हुने सम्भावना बिरलै हुन्छ। जीवन शैलीमा व्यक्तिको संस्कार प्रकट हुन्छ। गाँस (सत्ता)का लागि साथ (पार्टी ) र साख ( मूल्य) छाड्ने व्यक्तिका हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सत्तै्कन। कुलीन क्लबका महलवासी सदस्यले निम्नमध्यम वर्गको समर्थनमा टिकेको कांग्रेसको नेतृत्व गर्ला प्रतिनिधित्व गर्न सत्तै्कन। सभापतिका उमेदवार तीनै जनाको अहिलेको जीवनशैली महाधिवेशन प्रतिनिधिले देखेकै छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले नदेखेको तिनको २०४६ पहिलेको जीवन शैली हो। तर, त्यति बेलाको तिनको जीवन शैली देख्ने धेरैजना अहिले पनि कांग्रेसमा छन्। तिनलाई थाहा छ, भीमबहादुर तामाङ, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको आचरणमा अन्तर भए पनि अवस्थामा फरक थिएन। विगत र संगतले व्यक्तिको आगत निर्देशित हुन्छ। नेताको व्यक्तित्वले दलको आधारमात्र हैन अस्तित्व नै प्रभावित हुन्छ।
इतिहासको भारी जति धेरै गह्रुंगो हुन्छ उज्यालो र उकालो भविष्यको यात्रा उत्तिकै कठिन हुन्छ। कांग्रेसजनका लागि अहिलेको चुनौती यही हो।
Posted by govinda adhikari at 9/19/2010 10:44:00 AM
Labels: 12 general convention
एक्लो बृहस्पति बन!
के भनौ होला ?
उम्रदैमा तीन पात
बाल दिवस, २०१०
कांग्रेस कस्तो होला ?
जनताको दल कि कुलीन क्लब?
बालक र परेवा
धरहरासामु फोहोरको थुप्रो